को हुन् श्रृंखला खतिवडालाई पछि पार्दै मिस वर्ल्ड बन्न सफल मेक्सिकन सुन्दरी बेनेसा ? « Naya Page
को हुन् श्रृंखला खतिवडालाई पछि पार्दै मिस वर्ल्ड बन्न सफल मेक्सिकन सुन्दरी बेनेसा ?
प्रकाशित मिति :9December, 2018 3:13 pm
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली चेली श्रृंखला खतिवडा मिस वर्ल्डको सम्भावित विजेता आंकलन गरिरहेका बेला हिजो सबै अनुमानलाई फेल खुवाउँदै मेक्सिकन सुन्दरी वेनेसा पोन्सले ‘मिस वर्ल्ड’ को ताज पहिरिन सफल भइन् ।
मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा मिस वर्ल्डको सम्भावना नजिक रहेको भनिरहेका बेला खतिवडाको इतिहास रच्ने सपनामा नमिठो धक्का लगाउन सफल २६ वर्षीया वेनेसालाई अहिले नेपालीहरुले पनि नजिकबाट बुझ्न खोजिरहेका छन् ।
उनलाई यो सफलताको शिखरमा पुर्‍याउनका लागि उनको विगत कस्तो थियो भन्ने कुरा धेरैको चासोको विषय बनिरहेको छ । पाठकको चासोलाई केहि कम गर्नका लागि हामीले मिस वर्ल्ड विजेता वेनेसालाई नजिकबाट चिनाउने प्रयास गरेका छौं ।
शनिबार राति चीनको सान्या शहरमा मिस वल्र्ड २०१८ को उपाधि वेनेसाले पाएपछि अहिले उनी विश्वको नजरमा परेकी छन् । फाइनल राउन्डमा वेनेसालाई मिस वर्ल्ड बनेपछि अरुलाई कसरी मद्दत गर्नेछौ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो ।
उनले जवाफमा भनेकी थिइन्, ‘म आफ्नो पदलाई त्यसरी नै प्रयोग गर्नेछु जसरी पछिल्लो तीन वर्षदेखि गर्दै आएकी छु । हामीले सबैबारे सोच्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ । कसैलाई मद्दत गर्नु त्यति गाह्रो काम होइन । तपाईं बाहिर गएका बेला कसै न कसैलाई तपाईंको मद्दत चाहिरहेको हुन्छ । त्यसकारण सधैं मद्दतका लागि तयार हुनुहोस् ।’
वेनेसाले इन्टरनेशनल बिजनेसमा ग्रेजुएसन गरेकी छिन् । यसबाहेक उनले मानव अधिकारमा डिप्लोमा पनि गरेकी छिन् । वेनेसाको जन्म मेक्सिकोको मुआनजुआटो शहरमा भएको हो । उनी नेनेमी नामक एक स्कुलमा पनि काम गर्छिन् । यो स्कुलमा आदिवासी इलाकाका बच्चालाई विभिन्न संस्कृतिको शिक्षा दिइन्छ । उनको उचाई पाँच फिट ९ इन्च हो । उनले मे मा मिस मेक्सिकोको उपाधि जितेकी थिइन् ।
वेनेसालाई अंग्रेजी र स्प्यानिश भाषाकी जानकार हुन् । खाली समयमा उनलाई आउटडोर गेम खेल्न मनपर्छ । उनलाई भलिबल र स्कूबा डाइविङको शौख छ । वेनेसा महिलाको पुनर्वासका लागि काम गर्ने एक संस्थाकी बोर्ड अफ डिरेक्टरमध्येकी एक हुन् । एजेन्सी
कवि तथा पत्रकार सङ्गीत श्रोता पक्राउ
काठमाडौं, ११ असार : नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वतका पूर्व अध्यक्ष तथा नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत